SAMOTALIS: XUSKA 26-ka Juun Maalinta Xorriyadda Somaliland: Ahmed Arwo
XUSKA 26-ka Juun Maalinta Xorriyadda Somaliland: Ahmed Arwo
Axaddan oo kale 56 sanadood ka hor ayaa gumeysigu ka huleelay dalkeen ka dib qarni uu talo xumo iyo wax qabad la'aan inagu maamulay, inagu kala qaybiyey oo uu nidaam qabiilaysan oon ka bxi lanay inoo dhigay. Waa ayaan xus iyo qaiimeyn mudan, ayaan weyn oo taariikh dahab ah leh, ayaan faan faan iyo farxadi umadeyna mideysay yar iyo weyn rag iyo dumar
Ayamaha mid waliba qiimo gaar ah ayey leedahay, waxa xaalku xumaadaa kolka leys barbar eryo, iyada oo looga jeedo dano siyaasadeed iyo hadaf qarsoon. Waxaana qiimo u yeela amba xumeeya waa dhacdooyinka taariikheed ee maanlintaasi soo marto, wanaag iyo xumaanba. Dareen ahaan waa maalin himmiladii dadweynahu rabay laga waayey. Waa maalin hadafkeedu la waayey kolkii dawladii Xamar xarunta u ahayd laga waayey sinnaan, cadaalad bal se dagaal aan waxba loola hadhin lagula kacay shacbiguu dhaliyey midnimada. Taas ayaa qiimaheeda raad weyn ku yeelatay,
26kii Juun 1960, waa dharaartii aynu gobanimada helnay, waa ayaantii aynu noqonay dal xor ah oo ka mid ah dalalka adduun weynaha, Waa ayaantii abwaan iyo hoobal tooni aanu wax la hadhin. Waa dharaartii Alle ha u naxariistee Cabdillahi Suldaan Timacadde iyo Cabdi Iidaan tiriyeen gabayada taariikhiga ah een doogoobin. 26kii Juun 1960, waxay ahayd maalin in badan la saadaalinaayey. Waxay ahayd maalin rag iyo dumar, ciroole iyo caruur loo ciyaaray, loo soo jeeday, loo xaragooday.